5 Arimood Oo Lamaanaha Ka Saacidaya Inay Waligood Isjeclaadaan - Aayaha
Lamaane isjecel oo faraxsan
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»5 Arimood Oo Lamaanaha Ka Saacidaya Inay Waligood Isjeclaadaan
In lamaanaha ay noqdaan kuwo waligood isjeclaada waxay u baahantahay dadaalka labadiina lamaanaha ah. Arrintani waa mid uusan sameyn Karin hal lamaane.
Iminka jacaylka guurku wuxuu u muuqdaa mid sii yaraanaya. Nasiib wanaagse, waxaa jiraan waxyaabo lagu xalin karo arrintaas oo ay idiin soo gudbiney Shabakadda Aayaha, oo aad uga barateen talooyin cajiib ah.
Dagaalka oo caqli lagu xakameeyo
Isku dhacyo ayaa dhex dhaca guur kasta. Run ahaantii, guurka waxbaa ka qaldami kara iaydoo aanan loo baahneyn inuu dagaal dhaco.
Si aad waligiin isku jeclaataan lamaanahaaga, waxaad u baahantahay inaad ogaataan in dagaallada qaarkood aanan loo baahneyn. Sidaa darted haku dagaalamina waxyaabo aanan micno lahayn oo aad ogtahay.
Si joogto ah waqti iskula qaata
Waxaa lagaaga baahanyahay inaad si joogto ah waqti ula qaadato laamanahaaga. Inta lagu guda jiro waqtiyadaas waxaad abuureysaan xasuusyo qurux badan.
Xasuus qorku wuxuu abuuraa xiriir isku soo dhowaansho oo adag sidaa darted guurkiinu wuxuu noqonayaa mid guuleysta.
Midba kan kale waqti ha siiyo
Inkastoo lagu taliyay in waqtiga ugu badan ay lamaanaha isla qaataan hadana waxaa jiraan in qofku uu leeyahay shaqo iyo howlo kale oo uu qaban lahaa. Waxaad u baahantahay in lamaanahaaga aad siiso waqtigaas si uu howshiisa u qabsado.
Iska ilaali inaad mar kasta la joogto lamaanahaaga sababatoo ah ma sameysid waqti ay kuugu xiisto.
U ogoloow lamaanahaaga inuu shaqsi ahaan koro sida aad adiga u korto oo kale.
Ka feker dareenka lamaanahaaga kahor intaadan wax sameyn
Dadka badankood dhinacaan way ku qaldamaan. Waxay sameeyaan go’aano iyagoo aanan ka fekerin sida go’aanadaas ay u saameyn doonaan dareenka lamaanahooda.
Kahor intaadan wax sameyn, waa inaad ka fekertaa haddii waxaas ay dhaawacayaan laamanahaaga ama ay ka farxinayaan.
Dooro inaad sameyso wax aka farxin doona laamanahaaga.
Waxaad ka dhigataa dabeecad inaad u mahadceliso lamaanahaaga oo aad ammaanto adigoo iska ilaalinaya inaad diiradda saarto cilladeheeda ama xumaanteeda.